Fanafihana Sinoa tany Befandriana avaratra Dahalo iray maty ,voatifitra ny kaomandin’ny borigady …
Raikitra ny fifampitifirana teo amin’ny andian-jiolahy avy nanafika ny teratany sinoa mpandraharaha sy ny zandary. Naratra voan’ny bala ny kaomandin’ny zandary tao Befandriana avaratra sy ny Ben’ny tanànan’i Belalandy.
Vola mitentina 63 tapitrisa ariary kosa no voaroban’ireo jiolahy tao amin’io teratany sinoa io. Tao amin’ny kaominina Belalandy, distrikan’i Befandriana avaratra no nisehoan’ny fanafihana, omaly tokony ho tamin’ny iray ora maraina. Voalazan’ny vaovao avy any an-toerana fa enin-dahy nitondra fitaovam-piadiana no nanafika ity mpandraharaha ity.Maty voatifitra ny iray tamin’ireo dahalo, tsy nisy naninona kosa ireo sinoa, fa ny vola voalaza etsy ambony no voaroba tamin’ity fanafihana ity. Mbola manaraka fitsaboana avokoa moa ireto tompon’andraikitry ny zandary sy ny tompon’ny tanàna voatifitra io. Eo am-pikarohana ireo jiolahy mbola tafatsoaka kosa ireo mpitandro ny filaminana izay ahitana zandary, polisy ary miaramila amin’izao fotoana izao.